चार दिनको अन्तरमा पार्किङबाटै दुई वटा गाडी गायब – AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > चार दिनको अन्तरमा पार्किङबाटै दुई वटा गाडी गायब
May 22, 2020 May 22, 2020 GRISHI20
काठमाडौं /पार्किङ गरिरहेको स्थानबाट सवारी साधन चोरी गरेको आरोपमा कैलाली प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा दाङ तुल्सिपुर नगरपालीका- ५ न्युरोड टोलका १६ वर्षीय नबिन सार्की रहेका छन्। उनी परिवारसहित कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-१ बसन्त टोलमा बस्दै आएका थिए।
प्रहरीका अनुसार जेठ २ गते नबिनले धनगढी उपमहानगरपालीका-४ उतरबेहडी बस्ने राजेन्द्र बहादुर मल्लले आफ्नो घर अगाडि सडकमा पार्किङ गरी राखेको बा.८ च.२१०० नम्बरको कार चोरेका थिए। त्यसको चार दिनपछि उनले सोही ठाउँमा डेरा गरि बस्ने रबिन्द्र देव भट्टले घरबाहिर राखेको होन्डाई कम्पनीको बा. १४ च. ४७८१ नम्बरको गाडि चोरेको प्रहरीको दावी छ।
प्रहरीले नबिनको साथबाट दुवै गाडी बरामद गरेको दावी गरेको छ।
नबिन यसअघि पनि आपराधिक घटनामा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ। २०७६ बैशाखमा नबिनसहित दुई जनाले राजधानीमा दुई वटा क्रस फायर मोटरसाइकल चोरेर फरार भएको प्रहरीको दावी छ।
यसैगरि सोही वर्षको भदौमा दाङमा एक व्यक्तिले पार्किङ गरी राखेको लु १ च२६०३ नम्बरको सुजुकी कार पनि नबिनले चोरेको प्रहरीको भनाई छ। त्यसको एक महिनाअघि दाङमै भएको एक मोटरसाइकल चोरीमा पनि नबिन संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पूर्व मन्त्री आफताब आलमको घरमा छापा, प्रहरीमाथि आक्रमण